Iskudhafka 32 Adhijir Jarmal ee ugufiican: Liiska A ilaa Z iyo Sawirada - Taranka
Iskudhafka 32 Adhijir Jarmal ee ugufiican: Liiska A ilaa Z iyo Sawirada
Adhijirka Jarmalka waa mid ka mid ah eyda ugu caqliga badan uguna macquulsan.
Waxay ku kalsoon yihiin, daacad yihiin oo shaqeeyaan. Taas aawadeed waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu abuuro iskudhaf.
Isku-darka ugu horreeya wuxuu ahaa adhijir dahabi ah oo dahab ah qarnigii 20aad. Dhaxal-sugaha Dahabka ah iyo Isugeynta Shepherd Jarmalka ayaa weli ah mid ka mid ah isku-darka isku-darka adhijirka Jarmalka ee waqtiga oo dhan.
Hadda waa la qiyaasey waxaa jira in ka badan 60 nooc oo isku dhaf ah oo Jarmal ah .
Maqaalkan waxaan ku wadaagaynaa 32 isku darka ugu caansan iyo wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ...
Liiska Noocyada Kala Duwan ee Iskuduwaha Jarmalka
Iskudarka 32 Adhijir Jarmal ee ugu sareeya
1. King Shepherd
2. Shiloh Adhijir
3. Adhijirka Dahabka ah
8. Adhijirka Alaskan
9. Doberman Shepherd
11. Akita Shepherd
12. German Shepherd German
13. Chow Shepherd
16. Corman Shepherd
17. Adhijiraha Bahalka
18. Feer Shepherd
19. Euro Mountain Sheparnese
20. Mastiff Adhijre
21. Godka Adhijirka
22. Adhijirka Inu
23. Sheltie Shepherd
24. Saint Shepherd
25. Adhijirka Lo'da
26. Dane Shepherd
27. Airedale Shepherd
28. Greyhound Shepherd
29. Mareykan Bulldog Shepherd
31. Adhi Cusub
32. Adhijirka Pei
Boqorka Shepherd Shiloh Shepherd, Adhiyaha Jarmalka 100 ilaa 150 1
Shiloh Adhijir Adhijirka Jarmalka, Malamute, Caddaan Shedhi Canadian ah, Eyga Czech Wolf 80 ilaa 140 2
Adhijirka Dahabka ah Daaha ka qaadista Dahabka, Adhijirka Jarmalka 65 ilaa 90 3
Shepadoodle Poodle, Adhijirka Jarmalka 40 ilaa 65 4
Shepsky Siberia Husky, Adhijir Jarmal ah 35 ilaa 80 5
Sheprador Labrador Retriever, Adhijirka Jarmalka 50 ilaa 80 6
Shug Pug, Adhijirka Jarmalka 20 ilaa 50 7
Alaskan Adhijirka Alaskan Malamute, Adhijirka Jarmalka 75 ilaa 90 8
Doberman Shepherd Doberman Pinscher, Shepherd Jarmal 60 ilaa 100 9
Shollie Xudduudka Collie, Adhijirka Jarmalka 30 ilaa 60 10
Akita Shepherd Akita, Adhijir Jarmal ah 90 ilaa 130 kow iyo toban
Jarmalka Adhijirka Australiyaanka ah Adhijirka Ustaraaliya, Adhijirka Jarmalka 50 ilaa 90 12
Chow Shepherd Chow Chow
65 ilaa 70 13
Shepweiler Rottweiler, Adhijirka Jarmalka 75 ilaa 115 14
Shepinois Belgian Malinois, Adhijirka Jarmalka 50 ilaa 80 shan iyo toban
Corman Shepherd Pembroke Welsh Corgi, Shepherd Jarmalka 28 ilaa 50 16
Adhijirka Beagle Adhijirka Beagle, Adhijirka Jarmalka 20 ilaa 45 17
Adhijir feeder Feedhyahan, Adhijir Jarmal ah 65 ilaa 90 18
Euro Mountain Sheparnese Bernese Mountain Dog, Adhiyaha Jarmalka 70 ilaa 115 19
Mastiff Shepherd Mastiff, Adhijirka Jarmalka 90 ilaa 120 labaatan
Godka Adhijirka Godka Bull Terrier, Jarmal Adhijirka 30 ilaa 90 kow iyo labaatan
Adhijirka Inu Shiba Inu, Adhijirka Jarmalka 17 ilaa 50 22
Sheeko Shepherd Shetland Sheepdog, Shepherd Jarmalka 25 ilaa 40 2. 3
Saint Shepherd Saint Bernard, Adhiyaha Jarmalka 90 ilaa 120 24
Adhi lo'da Eyga Ustaraaliya, Adhi Jarmal 50 ilaa 90 25
Dane Shepherd Dane Weyn, Adhijirka Jarmalka 80 ilaa 140 26
Adhijirka Airedale Airedale Terrier, Jarmalka Adhijir 50 ilaa 90 27
Greyhound Shepherd Greyhound, Adhijirka Jarmalka 65 ilaa 90 28
Adhijirka Mareykanka ee Bulldog Bulldog Mareykan ah, Adhijir Jarmal ah 65 ilaa 90 29
Shepnees Pyrenees weyn, Adhijirka Jarmalka 65 ilaa 100 30
Adhi Cusub Newfoundland, Adhijirka Jarmalka 70 ilaa 90 31
Adhijirka Pei Shiine Shiine ah oo loo diro Pei, adhijirka Jarmalka 45 ilaa 70 32
Adhijirka Boqortooyada waa natiijada ka dhalata Shiloh Shepherd oo leh Adhijir Jarmal ah.
The Boqorka Shepherd waxay u badan tahay in loogu yeero Adhijir Weyne! Wuxuu joogaa dhererkiisa 29 and miisaankiisuna waa 150 rodol.
Boqorka Adhijirradu aad ayey ugu egyihiin muuqaal ahaan Adhijirka Jarmalka laakiin aad ayey uga ballaaran yihiin.
Isku-dhafkan ayaa loo jecel yahay iyaga dabeecad la saadaalin karo oo dabacsan .
Waxay sidoo kale leeyihiin jacaylka carruurta. Sababtaas awgeed King Shepherd wuxuu sameeyaa wehel wehel ah.
The Shiloh Adhijir waxaa marki uguhoreysay Tina Barber 1970s. Waxay ka niyad jabtay arrimaha caafimaadka (tusaale, sinta dysplasia iyo dhabarka foorarsiga) ee heerka Shepherd.
Shiloh Shepherds ma aha oo kaliya isku dhafka Shepherd Jarmalka. Shiloh Shepherd waa nooc ka mid ah:
Adhijir Cadaan ah oo reer Kanada ah.
Eyga Czech Wolf.
Shilohku waa jilicsanaan jilicsan.
Waxay sameeyaan eey qoys oo aad u samir badan.
Adhijirka Dahabka ah waa isku darka u dhexeeya Adhijir Jarmal ah iyo Golden Retriever. Waxay labanlaab u yihiin daacadnimada iyagoo wata dhogor dheeri ah!
Noocan jilicsan ayaa leh dhagaha adhijir iyo jaakad dahabi ah a Dahab dahab ah .
Adhijirka Dahabka ah ku dhaqaaq nimcada 'Golden Retriever' oo waxaad leedahay muuqaal ciyaareed oo ah Adhijir Jarmal ah. Aad bay u firfircoon yihiin.
Isku-darkaani wuxuu u baahan yahay guri ay xubno firfircoon ka yihiin qoyska. Waxay jecel yihiin socodka, dabaasha iyo ciyaarta.
Shepadoodles waa isku dhafan aad u fiican kuwa la xanuunsanaya xasaasiyadda eyga laakiin waxay rabaan eey u daacad ah oo isku kalsoon sida Adhijirka Jarmalka ah.
Shepadoodle-ku waa qayb German Adhijir ah iyo qayb Poodle ah.
Qaar ka mid ah iskudhafyadaani waxay leeyihiin gabi ahaanba madow ( sawirka kore ) iyo kuwa kale ayaa leh calaamadaha madow iyo tan oo ah Adhijir Jarmal ah. Iyadoo aan loo eegin midabka jaakadooda dhammaantood waxay leeyihiin timaha jilicsan ee Poodle.
Isagu waa nooc saaxiibtinimo leh oo dadka iyo xayawaannada kale la dhaqan.
Caqligiisu waa kan labaad mana jiro oo wuxuu jecel yahay mashquul. Si kastaba ha noqotee, tani waxay noqon kartaa seef laba af leh. Isku-darka caqliga leh wuxuu heli doonaa habab kala duwan oo lagu maaweeliyo naftiisa - kuwaas oo qaarkood ka waxyeello badan kuwa kale!
Dabaasha waa hab fiican oo looga baxo tamartooda.
Shepsky waa isku dhafka Siberia Husky iyo Shepherd Jarmal.
Isku-dhafkan wuxuu leeyahay indhaha buluuga ah ee Siberia Husky iyo saxeexa Jarmalka Shepherd ee maaskaro madow. Tani waxay iyaga siinaysaa muuqaal u eg yeey.
Shepsky waa nooc kalsooni badan leh.
Kalsoonidooda ayaa iyaga ka dhigta saaxiibtinimo u leh dadka kale eeyaha, aadanaha iyo xayawaanka rabaayadda ah.
Isaguba waa eey isboorti iyo nimco leh. Markaad banaanka ka joogto Shepsky waxay leedahay waditaan xoog leh oo ugaarsi ah - gaar ahaan marka aan la jimicsiga sameynin. Waxaad u baahan doontaa inaad ku hayso isku-dhafkan aagga deyrka ku jira inta lagu jiro ciyaarta ciyaarta. Rally waa jimicsi weyn isaga.
Isku-darkaani maahan xulashada ugu fiican ee milkiilayaasha markii ugu horreysay maadaama ay aad u firfircoon yihiin ayna shaqeeyaan.
Sheprador waa isugeyn jacayl taas oo ah kalsooni iyo farxad-tag-nasiib.
Isku darkaani waa badh Jarmal Shepherd iyo badh Labrador Retriever.
Qaar ka mid ah Shepradors waxay leeyihiin saxeexa Jarmalka Shepherd tan iyo qaab madow iyo kuwa kale ayaa leh qaabka midabka adag ee ah Labrador Retriever.
Shepradors waxay samaystaan ​​xayawaanka qoyska ugu fiican milkiilayaasha markii ugu horreysay.
Waxay si fudud u fudud yihiin tababbarka sababo la xiriira caqligooda iyo hamigooda ah inay ka farxiyaan.
In kasta oo Sheprador uu caqli leeyahay iyaguna way firfircoon yihiin. Labrador Retrievers waxaa loo yaqaanaa inay ubaahan yihiin dhaqdhaqaaqyo badan sidaa darteed Sheprador waxay ubaahantahay waqti badan oo ciyaar ah.
Shug waa natiijada lammaanaha aan macquul ahayn - Pug iyo Shepherd Jarmal.
Dulucyadu waxay samaystaan ​​eey weyn oo dabaq ah waxayna iska bartaan adhijirka Jarmalka u shaqeeya.
Isku darkaani wuxuu isku daraa laba daraf iyo natiijooyin eey jecel fadhiga sariirta sida banaanka .
Shugs waa caadi ahaan tan oo leh jaakad jilicsan. Waxay leeyihiin muuska iyo cabiraha adhijir Jarmal ah. Isku darkaani wuxuu leeyahay aar ka dheer kan waalidkiis Pug sidaa darteed wax dhibaato ah kama soo gaari doono cilladda hawo-mareenka brachycephalic .
Shugga wuxuu caadi ahaan leeyahay shakhsiyadda saaxiibtinimada ee Pug iyo wadista Adhijirka Jarmalka.
Shugs-yada way ka dabacsan yihiin qaar badan oo ka mid ah iskudhafka adhijirka Jarmalka ee liiskan.
Waxay kufiicanyihiin bilowga waxayna leeyihiin taariikh asal ahaan wehel.
Haddii aad rabto iskudhaf iskudhaf ah oo jecel qabowga markaa Alaskan Shepherd ayaa qumman.
Isku darkaani wuxuu isku daraa ruuxa shaqada ee Alaskan Malamute iyada oo ay daacad u yihiin Adhijir Jarmal ah.
Noocan u eg Yeyda wuxuu u taagan yahay 25 inji, miisaankiisuna waa 75 rodol.
Wuxuu ku yimaadaa midabbo iyo qaabab kala duwan laakiin had iyo jeer wuxuu leeyahay muuqaal isboorti.
Madaxbanaanidooda waalidkood Alaskan Malamute waxay ku noqon kartaa wax badan milkiilayaasha cusub. Adhijirka Alaska waa in la tababaro da 'yar. Tani waa muhiim si looga joojiyo inuu noqdo mid riixaya oo ka fog.
Waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in waalidkood Alaskan Malamute uusan ka cabaneynin sinta dysplasia, dwarfism, hypothyroidism ama von Willebrand’s disease.
Labada calaamadood ee Doberman Pinscher iyo Jarmalka Shepherd ayaa ka muuqda isku dhafkan.
Adhijirka Doberman waa ilaaliyaha saxda ah si aad u ilaaliso amniga qoyskaaga.
Qeybta Doberman Pinscher iyo qeyb Adhijirka Jarmalka ah waa kuwo jilicsan, awood badan oo aad u feejigan.
Waxay isugu jiraan isku-dheelitirnaan iyo xoog cayriin labadaba. Sida waalidkood Doberman Shepherd waa isboorti oo wuxuu jecel yahay in la shaqeeyo. Ilaalinta ayaa siin doonta shaqo uu jeclaan lahaa inuu qabto.
Doberman Shepherd wuxuu leeyahay tayada ugu wanaagsan ee labada waalid. Wuxuu leeyahay laabta qoto dheer iyo lugaha muruqyada ee Doberman iyo adkeysiga adhijirka Jarmalka.
Doberman Shepherds waa kuwo aan fiicnayn oo feejignaan leh - sida kuwa badan ilaaliyaha isku darka eeyaha . Waxay u adag yihiin inay feejignaadaan laakiin ma ahan kuwo dagaal badan.
In kasta oo muuqaalkooda kulul haddana Doberman Shepherd uu yahay mid jecel oo daacad ah.
Shollie A ayaa lafteeda isku urursan doonta qalbigaaga!
Isku-dhafkan waa isku-dhafnaanta Xudduudka Collie iyo Jarmalka Shepherd. Marka labadan taranka xoolaha la isku daro waad helaysaa qas ah oo leh ruux dhalaalaya oo firfircoon.
Shollies u eg timo dhaadheer oo Jarmal ah waxayna caadi ahaan ku yimaadaan madow iyo tan.
Isku darkaan quruxda badan ayaa jecel banaanka. Shollie-ka wuxuu sameeyaa lamaane tababar oo cajiib ah wuxuuna jecel yahay inuu ku garab joogo.
Shollies waa kuwo aan dhammaad lahayn daacad u ah qoyskooda.
Waxaad filan kartaa isku-dhafkan inuu noqdo eey caqli badan. Si kastaba ha noqotee sida eeyo badan oo caqli badan ay u helaan wax iyaga u gaar ah ayaa aad muhiim u ah. Haddii aad haysato waqti iyo tamar aad ku ilaaliso isku-dhafkan farxad markaa waligaa ma niyad jabi doontid.
Adhijirka 'Akita Shepherd' waa isku darka Akita iyo Shepherd Jarmal. Labadan taranka waa kuwo kulul laakiin isjecel.
Isku dhafkan cabbirka weyn waxaa sidoo kale loo yaqaan 'Shepkita'. Waxaa si fudud loogu aqoonsan karaa dabadooda cirifka ah iyo jaakad jilicsan.
Adhijirka Akita wuxuu dhaxlayaa labada sheer ee Jarmalka iyo Akita labadaba cufan.
Akita Shepherds waa kuwo madax banaan oo si dabiici ah loogu habeeyay shisheeyaha. Isdhexgalka bulshada iyo tababbarku waa muhiim si looga hortago dabeecad dagaal ah .
Qiyaas ahaan qoyskooda isku-dhafan ayaa jecel oo goofy.
Waxaa la yaab leh isku-dhafkan wuxuu sameyn karaa eey dabaq ah. Waa haddii ay helaan jimicsi badan eeyahaani waa aamusnaan oo dhif ayayna ciyaan.
Adhijirka reer Jarmal ee Ustaraaliya waa quwad xoolaad! Isku-dhafkan waa qayb Adhijirka Ustaraaliya iyo qayb ka mid ah Adhijirka Jarmalka.
Iyagu waa kuwo caqli badan, isboorti oo la jeclaan karo.
Adhijirka reer Jarmal ee Australiyaanka ah waxay leeyihiin muuqaal u gaar ah oo aan ka duwanayn nooc kasta oo isku dhafan . Eygan dhagaha-badan leh ayaa badanaa isboorti qayb yar oo ka mid ah qaabka Shepherd-ka ah ee madow iyo tan madow oo leh meeris meeris ah oo dhabarkooda ah.
Eygan waa labadaba cayaaraha iyo agile mahadnaq waalidkiis.
Adhijirka reer Jarmal ee Ustareeliya waxay samaystaan ​​wehel wanaagsan laakiin iyagu aad bay u janjeedhaan shaqada. Way fiican yihiin marka shaqo la siiyo sidaa darteed waxay leeyihiin marin tamar.
Tartanada xoolaha, raadinta iyo quusitaanka ayaa ah qaabab aad u fiican oo jimicsigaan lagu jimicsado.
The Chow Shepherd waa mid ka mid ah Isku-darka Isku-darka Shepherd Jarmal ee liistada ku jira.
Waxay caadiyan haystaan ​​Chow Chow libaax u eg manka iyo maaskaro madow ee Jarmalka Shepherd. Qaar badan oo adhijirro ah 'Chow Shepherds' ayaa sidoo kale ilaaliya dabada Chow Chow.
Chow Shepherds waxay leeyihiin dabeecad la mid ah Akita Adhijir (# 11) . Waxay leeyihiin shakhsiyadda foojignaanta Jarmalka ee Shepherd iyo ka fogaanshaha Chow Chow ee ku wajahan shisheeyaha.
Dabeecaddooda qallafsan waxay ka dhigeysaa isdhexgal hore iyo tababarka adeecidda mid muhiim ah.
Adhijirka Chow wuxuu noqon karaa khiyaano in la tababaro madax adaygooda awgood. Si kastaba ha noqotee, Rabitaanka Adhijirka Jarmalka ah inuu ku farxo ayaa ka dhigaysa iyaga waxoogaa madax-adag oo ka hooseeya Chow Chow saafi ah.
Shepweilers ayaa sameeya ilaaliyaha ugu fiican.
Iyagu way cabsi gelinayaan oo waxay uga digayaan mulkiilahooda khatar kasta oo ka soo food leh jilif xoog leh.
Isku-dhafkan wuxuu isku daraa isha isha ee Rottweiler iyo sirdoonka Shepherd-ka Jarmalka. Waxay sameeyaan ilaaliye daacad ah iyo wehel isboorti.
Gudaha Shepweilers dhexdeeda waa goofy iyo xiiso-jecel. Way ku faraxsan yihiin inay la ciyaaraan oo ay la nastaan ​​dadkooda.
Iyagu sidoo kale waa nooc fara badan oo ku faraxsan dibadda. Waxay caan ku yihiin inay ku tartamaan agility iyo tartamada carafta.
Sababta oo ah dhaxalka ilaalinteeda iyo jimicsiga sare waxay ubaahanyihiin iskudhafkan laguma talinayo bilowga.
Shepinois waa shaqaale hufan oo lagu kalsoonaan karo. Badanaa waxaa lagu sifeeyaa inay yihiin nooc shaqo oo fiican.
Mararka qaarkood loo yaqaan 'Malinois X' isku dhafkan waa iskutallaab u dhexeysa Reer Biljim Belgian iyo Shepherd Jarmal.
Shepinois wuxuu u egyahay a King Shepherd (# 1) laakiin ka yar cabbir ahaan. Caadi ahaan waxay leeyihiin lugaha dhaadheer iyo jirka midabka leh ee Belgian Malinois iyo jaakadda qaro weyn ee Shepherd Jarmal.
Labada waalidba waa eeyo shaqeynaya oo loo soo saaray ciyaaraha fudud sidaa darteed isku dhafkan kuma haboona milkiilaha markii ugu horeysay.
Ilaa aad Shepinois shaqo siiso mooyee waxay noqon doonaan kuwo wax dumiya oo ay adag tahay in lala qabsado. Kartida, xoolo dhaqashada, iyo tartamada Schutzhund ayaa ah shaqooyin wanaagsan oo loogu talagalay noocyadan.
Corman Shepherds waa Beelaha la jecel yahay oo kalsooni leh.
Isku-dhafkan aan caadiga ahayn waa qayb Pembroke Welsh Corgi iyo qayb ka mid ah Adhijirka Jarmalka.
Way adkaan kartaa in la aamino in isku-dhafkan uu jiro maxaa yeelay Adhijirka Jarmalka waa dhererka laba Pembroke Welsh Corgis!
Corman Shepherds caadi ahaan waxay leeyihiin dhagaha dhibcaha iyo lugaha gaagaaban ee Corgi. Tani waxay keeneysaa caado badanaa u eg 'Corgi-fied' Shepherd German.
Waxa Pembroke Welsh Corgis iyo Shepherds Jarmal ay wadaagaan waa labadoodaba waa eeyo dhaqda. Sababtaas awgeed waa inaad ka filataa isku-dhafkan inuu yeesho dareen xoolo dhaqasho oo xoog leh.
Corman Shepherds waxay leeyihiin shaqsiyad baxaysa waana eeyo shaqeynaya.
Adhijirka Beagle waa kala badh Beagle iyo badh kalsooni Jarmal.
Adhijirka Beagle waa a iskudhafka eyda dhagaha-badan.
Isku darkaani wuxuu isku daraa soo jiidashada Beagle iyo daacadnimada Shepherd Jarmalka - oo ku habboon qof kasta oo aan awoodin inuu kala doorto labada.
Adhijirka Beagle waxay leeyihiin dhagaha jilicsan ee Beagle oo leh qaab ciyaareed fudud.
Labadaba Beagle iyo Shepherd Jarmal waxay ku raaxaystaan ​​jimicsi. Socodka Adhijirka Beagle wuxuu si joogto ah u raaci doonaa sankiisa. Waxaad u baahan doontaa inaad isaga ka ilaaliso dhibaatada!
Haddii aadan lugeyneynin dhowr saacadood maalintii tani ma noqon karto noocaaga.
Feer Shepherds waa natiijada ka dhalatay taranka Feeryahan iyo Jarmal Shepherd.
Iyagu waa caaqil caqli badan oo xiise jecel.
Isku darka Shepherd-ka Jarmalka waa sahlan tahay in lagu ogaado astaamahiisa wejiga oo badanaa isku dhafan labada waalid ee madow. Waxa kale oo uu leeyahay feedhaha qoto dheer ee Feerka.
Adhijirka Feeryahanku waa ciyaar iyo ciyaarba leh . Iyagu waa dhif in ay u janjeedhaan dhanka shaqada oo halis ah.
Markaad ku ciyaareyso feeder feeder filo tamarta qarxa ee feeryahan!
Tani waa nooc aan loogu talagalin carruurta yar yar ama dadka waaweyn ee jilicsan. Ku-boodku wuxuu noqon karaa arrin isku-dhafkan ah maaddaama ay kaliya jecel yihiin inay ciyaaraan. Ciyaarta feerka iyo adkaysiga Jarmalka ee Shepherd ayaa ka dhigi kara iyaga kuwa buuq badan.
Euro Mountain Sheparnese waa xulasho weyn oo loogu talagalay qof kasta oo raba isku-dhafka Jarmalka Shepherd.
KU Buurta Bernese lagu qaso Shepherd Jarmal waxay keeneysaa eey dhogor weyn leh.
Haddii aad qaadato Euro Mountain Sheparnese ka dib ka filo dharkaaga iyo alaabtaada inay ku daboolaan dhogorta. Koodhadhkoodu si xoog leh ayuu u daadanayaa sanadkiiba laba jeer.
Eeyahaani waxay kujiraan dhanka xasilloonida marka loo eego iskudhafka badankood waxayna ku barwaaqoobaan qoys deggan.
Waa kuwo xasaasi ah oo aan ka fogaan doonin dadkooda.
Mastiff Shepherd waa eey leh awood ilaalin dabiici ah.
Tani waa nooc ku habboon ilaalinta gurigaaga.
Mastiff Shepherds waxay isku daraan joonyada jilicsan ee Mastiff iyo isboortiga Shepherd Jarmalka. Waxay sidoo kale leeyihiin indhaha jilicsan ee Mastiff.
Taageerayaal badan ayaa ku aqoonsada noocyadan sankooda dheer iyo dhagaha () eeg sawirka kore ).
Waxaa loo kala saaray inay yihiin iskudhaf weyn. Maaha wax aan caadi ahayn inay culeyskoodu kor u dhaafaan 100 rodol. Baaxaddooda darteed hubi inaad kormeerto carruurta iyo eeyaha la ciyaaraya Adhijirkaada Mastiff.
Eeyahaani waxay qaadan karaan xoogaa waqti si ay u kululeeyaan martida laakiin waxay aad u jecelyihiin qoyskooda.
Noocani waa mid is haysta, murqo leh oo caqli badan.
Godadka Shepherd waa isku dhafan oo isku dhafan oo loogu talagalay guryaha isboortiga.
Iskutallaabtan udhaxeysa Adhijirka Jarmalka iyo Godka Dibida Maraykanka waa hawl adag oo firfircoon. Wuxuu isku daraa jirka muruqyada Pitbull iyo maskaxda shaqada u janjeedha ee Shepherd Jarmal.
Muuqaalka Shepherd Pit wuu kala duwanaan karaa laakiin badanaa waxay u egyihiin is haysta iyo Gabar adhijir Jarmal ah . Caadi ahaan waxaad ku aqoonsan kartaa noocyadan iyaga oo ah madaxa jacaylka-qalbiga leh ee madaxa leh.
Noocani wuxuu ugu fiican yahay wehel ahaan.
Waxay yihiin a kalsooni iyo farxad-go-nasiib nasiib ciyaarta jecel.
Si habboon loo tababaray oo la dhexgalay bulshada Godka Adhijirka waa eey jecel oo had iyo jeer diyaar u ah inuu ciyaaro.
Adhijirka Inu waa isku darka adhijirka Jarmalka iyo Shiba Inu.
Isku dhafka ka dhashay ayaa ah eey taas waxay u egtahay dawaco iyo yeey.
Shepherd Inus waa nooc isboorti ah laakiin ka madaxbannaan nooca Shiba Inu. Tani waxay ugu wacan tahay Adhijirka Jarmalka ah ee doonaya inuu ka farxiyo dabeecadda. Sababtoo ah dabeecadda loo habeeyay Shiba Inu waxay sidoo kale aad uga xishoodaan shisheeyaha.
Isku darkaani waa mid geesinimo leh, mid gaar ah oo muujinaya tayada bisadaha ee Shiba Inu.
Caadi ahaan isku-dhafkan wuxuu leeyahay tan Jarmalka Shepherd's tan iyo jaakad madow oo leh dabada cirifka ah ee Shiba Inu.
Marka ay timaado waxqabadka firfircoonidaani waa mid aad u firfircoon oo dhaqso badan. Way ku faraxsan yihiin inay saacado ku qaataan socodka, orodka ama dabaasha.
Sheltie Shepherd waa iskutallaab udhaxeysa caqliga Shetland Sheepdog iyo adhijirka reer Jarmal ee dadaalka badan.
Tani waa nooc in waa mid aad u jecel.
Wuxuu ku garab joogi doonaa labadaada daqiiqadood ee ugu sarreeya iyo kan ugu hooseeya labadaba.
Sheeko Shepherds waa isku dhafka laba eey isboorti iyo eyda caqliga leh laakiin leh qallooc. Iyaguna waa eey qoys weyn maxaa yeelay iyagu ugama sarreeyaan sida iskudhafka kale ee shaqeeya.
Isku darka Shepherd Jarmalka wuxuu isku daraa shetland Sheepdog cabirkiisa yar iyo dhogorta qalafsan oo leh jirka isboortiga Jarmalka iyo maaskaro madow.
Sheltie Shepherd waa nooc ka mid ah kalsoonida, ciyaarta iyo jilicsanaanta.
Waxay sidoo kale yihiin kuwo aad u caqli badan, oo doonaya inay ka farxiyaan, oo si fudud loo tababaro.
Ma waxaad raadineysaa eey qoys u saaxiib ah oo isboorti iyo dabacsan?
Isku darkaani waa kala badh ciyaartooy Jarmal Jarmal ah iyo badh dabacsan Saint Bernard.
Saint Shepherds waxay isku daraan labada astaamood ee taranka si ay u soo saaraan isku dhaf xoog leh, dhaqaaqa, jilicsan oo jilicsan. Ku mahadnaqid jilicsanaanta Saint Shepherd wuxuu saaxiib fiican ka dhigaa carruurta yaryar.
Isku-darkaani wuxuu leeyahay jaakad madow iyo midab buluug ah leh dhejisyo dhogor cad oo cadcad.
In kasta oo muuqaalkiisu jilicsan yahay haddana Saint Shepherd kaliya waxay u baahan tahay cadayasho toddobaadle ah.
The Saint Shepherd waa nooc ku faraxsan inuu sameeyo kaliya 30-daqiiqo oo jimicsi ah maalintii. Waxay si fudud u jecel yihiin inay kugu ag dhawaadaan oo waxay garab joogi doonaan qoyskaaga illaa toban sano.
Adhijirka Lo'da ayaa isugu jira kuwa Eyga Ustaraaliya iyo Shepherd Jarmal.
Haddii aad rabto iskudhaf xoolaad ah oo aan shaqo badan ahayn si aad uhesho noocani waa musharax wanaagsan.
Isku dhafkaani waa caqli badan, shaqeysiin badan oo hawlkar ah.
Adhijirrada Lo'da ayaa ah eey shaqeeya oo aan ahayn eey qoys.
Isukeenistaan ​​waxaa sida ugu fiican loogu aqoonsan yahay sankeeda sida yeeyda iyo jaakada meeriska ee loo yaqaan 'Cattle Shepherd's merle'.
Adhijirrada Lo'du way madax adkaan karaan oo si fudud ayey u caajisi karaan. Waxay leeyihiin xaddi badan oo tamar iyo caqli leh. Sababtaas awgeed Adhijirkaaga Lo'da ayaa had iyo jeer 'socda'.
Haddii aad rumeysan tahay in kan ka weyn uu ka wanaagsan yahay ka dib si dhow ugu fiirso iskudhafkan.
Adhijirka Dane waa isugeyn weyn taas oo u dhexeysa 24 ilaa 32 inji dherer. Wuxuu xambaarsan yahay dabeecadda Adhijirka Jarmalka iyo baaxadda Dane Weyn.
Cabbirkiisa weyn wuxuu si fudud u ridi karaa qof kasta oo qaangaar ah. Sababtaas awgeed wuxuu u baahan doonaa inuu barto astaamaha aasaasiga ah ee eygu.
Adhijirrada Dane waxay u egyihiin Daan Weyn oo leh saxeexa madow ee Shepherd Jarmal. Waxay leeyihiin jaakad jilicsan oo ay daadiyaan wax ka yar isku-darka badan ee liiskan.
Isku darkaani wuxuu leeyahay dabeecad feejignaan ah laakiin ma ahan ilaaliye.
Adhijirka Dane waxay jecel yihiin inay la joogaan dadkooda sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaadan keligaa uga tagin keligiis muddo dheer.
Adhijirka Airedale waa iskutallaab udhaxeysa Airedale Terrier iyo Shepherd Jarmalka.
Isku dhafkaani waa sida feisty sida terrier ah laakiin u caqli badan sida eey dhaqato. Isagu waa kan ugu fiican labada waalid!
Airedale Shepherds caadi ahaan waxay u egyihiin Terrier weyn.
Waxay leeyihiin jaakada dhalada ee Airedale Terrier iyo tilmaam ku saabsan sanka Shepherd Jarmal.
Adhijirka Airedale wuxuu leeyahay a shakhsiyadda feisty iyo buuq badan in cabsi badan lagu yaqaan. Waxay noqon karaan kuwo aad ugu faraxsan dadka dhexdiisa sababtuna tahay shaqsiyaddan shaqada ka baxday ee faraxsan-tag-nasiib-darrada ah.
Airedale Shepherds guud ahaan way fududahay in la tababaro laakiin waxay u baahan yihiin jimicsi fara badan.
The Greyhound Shepherd waa isku dhafka u dhexeeya Greyhound iyo Jarmalka Shepherd.
Isku-darkaan dheer wuxuu isku daraa lugaha dhaadheer ee caatada ah ee Greyhound iyo jirka muruqyada ee Shepherd Jarmal.
Caato weli xoog badan Greyhound Shepherd waa hybrid a soon iyo nimco leh.
Greyhound Shepherds caadi ahaan waxay leeyihiin wax badan oo ah shakhsiyadda Greyhound oo madax bannaan oo jilicsan. Si kastaba ha noqotee waxay sidoo kale sii hayaan Adhijirka Jarmalka ah ee doonaya inuu ku farxo oo ku faraxsan shaqadiisa.
The American Bulldog Shepherd waa eey isboorti isboorti leh.
Qeyb Bulldog Mareykan ah iyo qeyb Shepherd Jarmal ah iskudhafkani waa dabacsan yahay mana aha mid aad ugu faraxsan sida Shepherd Jarmal.
The American Bulldog Shepherd wuxuu leeyahay muuqaal qurux badan oo leh weji qurux badan oo Bulldog Mareykan ah.
American Bulldog Shepherds waxay isku daraan saaxiibtinimada Bulldog-ga Mareykanka iyo Shepherd-ka Jarmalka ah ee u heellan inuu ku farxo.
Waxay kala yihiin aad u jecel qoyskooda.
Nasiib darrose waxay lahaan karaan dareen xoolaad oo xoog leh - oo la mid ah iskudhafka ugu badan ee liiskan ku yaal. Si kastaba ha noqotee, labada waalid ee waalidkoodba si fudud ayaa loo tababaray sidaa darteed isdhexgalka hore ee bulshada ayaa gacan ka geysan doona kahortaga dareenkan.
Shepnees waa a nooc weyn oo isku dhafan ee Adhijirka Jarmalka iyo Pyrenees Weyn.
Eeyaha Shepnees waa nooc kale oo ku habboon qof kasta oo doonaya wehel dabacsan.
Isku-darkaani wuxuu isku daraa hamiga ah inuu ka farxiyo tamarta Adhijirka Jarmalka leh dabeecadda deggan iyo dulqaadka weyn ee Pyrenees.
Natiijadu waa caqli iyo degganaan.
Isku darkaani waa mid caadi ah eey cadcad oo qalafsan . Waxay ku lebisan yihiin jaakad adhijirka Jarmalka ah iyo xabbado cad cad oo adag. Timahooda qalafsan ayaa ah wax lagu farxo xayawaanka laakiin way adag tahay in la nadiifiyo.
Shepnees waxay ka dhaxli doontaa fikirka madaxbanaan waalidkooda weyn ee Pyrenees. Sidaas darteed waxaad u baahan doontaa inaad tababarka ka dhigto mid gaaban oo xiiso leh.
Adhiga Cusub waa wehel saaxiibtinimo oo qoys. Waxay tan ka helaan waalidkood Newfoundland oo caan ku ah dabacsanaanta iyo dulqaadka carruurta
Isku-dhafkan Newfoundland iyo German Shepherd waa a samir, kalgacal iyo jilicsanaan weyn.
Shep-ka cusub waa isku-dhafka jilicsanaanta Newfoundland iyo daacadnimada Shepherd Jarmalka.
Sheps-ka cusub waa nooc guud oo cajaa'ib leh wehel macaan.
Koodhadhkoodu caadi ahaan waa meel u dhexeysa Fluffiness-ka Newfoundland iyo dhererka gaaban ee Shepherd-ka Jarmalka. The Newfoundland's jowls droopy waxaa badanaa lagu beddelaa muuska Jarmalka Shepherd.
Shepherd Pei waa iskutallaab udhaxeysa Shiinaha Shar Pei iyo Jarmalka Shepherd.
Eyga eyga isku dhafan ayaa ah labada waalid ee iska soo horjeeda. Shae Pei waxaa lagu yaqaan madax-adeyg iyo madax-bannaanida. Adhijirka Jarmalku waa nooc shaqo oo caan ku ah inuu jecel yahay inuu ka farxiyo.
Shiinaha Shar Peis waa caan ku caan adag oo adag in la tababaro nooc.
Haddii aad rabto Shar Pei laakiin aad rabto tababarka inuu noqdo waayo-aragnimo la maareyn karo markaa tixgeli iskudhafkan.
Nasiib wanaag isku-dhafkan wuxuu hayaa muuqaalka qurxoon ee Shar Pei iyo duuduubnaanta wajiga sidoo kale.
Isku darka Shepherd Jarmalku wuxuu sameeyaa eeyo cajaa'ib leh oo daacad ah.
Isku-darka kasta ee liiskan wuxuu leeyahay daacadnimo, kalsooni iyo ku faraxsanaanta shaqada dabeecadda Adhijirka Jarmalka.
Marka ay timaado helitaanka iskudhafka saxda ah ee adiga kugu habboon, waa inaad kubilaawdaa fahamka waxaad rabto:
The Saint Shepherd iyo Shepherd-da Dahabka ah waxay sameeyaan xayawaan guriyeed fiican.
Shepweiler-ka iyo Mastiff Shepherd waa eeyo kalsooni badan leh oo ilaalo ah.
Isku-darka 'Husky x German Shepherd Mix' wuxuu sameeyaa madadaalo iyo firfircooni firfircoon.
Isku-darka kasta waa mid gaar ah.
Samee baaritaankaaga si aad u hubiso inaad heshid ey ku habboon qaab nololeedkaaga.
Miyuu Adhijir Jarmal ah u qasaa eeyga kugu habboon adiga? Aan ogaano.
4 Sababood Oo Ay Eeydu U Cunaan Cawska & Waxa Laga Qabto
Maxaa ka dhigaya eeyga Chug mid aad u goof badan?
Shepherd jarmal ah collie husky mix
jack Russell Chihuahua isku darka nolosha
guduud iyo caddaan siberian husky puppy
Isku-dhafka shaybaadhka pitbull oo koray oo buuxa